Southwest Airlines dia milaza ny fiasan'ny sidina ao Jamaika amin'ny fiakarana
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Jamaika » Southwest Airlines dia milaza ny fiasan'ny sidina ao Jamaika amin'ny fiakarana
Airlines • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Karaiba • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao Mafana Jamaika • Vaovao • fanorenana • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia
Ny mpitantana ny Southwest Airlines tamin'ny Alarobia 22 septambra 2021, tao amin'ny foiben'izy ireo Dallas, Texas, dia nampahafantatra ny minisitry ny fizahantany any Jamaika, Hon. Edmund Bartlett, fa ny fiasan'izy ireo sidina mankany Montego Bay amin'ny herinandro sy volana ho avy dia manakaiky ny ambaratonga firaketana mialoha ny pandemika amin'ny taona 2019, izay manamarika ny fitomboan'ny fangatahan'ny mpitsangatsangana amerikana any Jamaika.
Ny mpitantana fizahan-tany any Jamaika dia manao fihaonambe maromaro amin'ireo mpitarika indostrian'ny fizahan-tany manerana ny tsenan-tahiry any Etazonia sy Kanada.
Ny tanjona dia ny hampitomboana ireo tonga any amin'ny toerana haleha ary koa hampiroboroboana ny famatsiam-bola bebe kokoa amin'ny sehatry ny fizahan-tany.
Ny fiaraha-miasa matanjaka eo amin'ny Jamaica sy Southwest Airlines dia mampitombo ny sehatry ny fizahantany an'ny firenena amin'izao fotoan-tsarotra izao.
Southwest no iray amin'ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka lehibe indrindra any Etazonia ary izy no kaompaniam-pitaterana vidiana ambany indrindra. Izy io dia miasa sidina tsy miato eo anelanelan'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena amerikana any Houston (Hobby), Fort Lauderdale, Baltimore, Washington, Orlando, Chicago (Midway), St. Louis, ary Montego Bay.
Nanatevin-daharana ny minisitry ny fizahan-tany, Donovan White ny minisitra; Strategiste zokiolona ao amin'ny Ministeran'ny fizahantany, Delano Seiveright; ary Tale lefitra misahana ny fizahan-tany any Amerika, Donnie Dawson. Izy ireo dia manao fihaonambe maromaro amin'ireo mpitarika indostrian'ny fizahan-tany manerana ny tsenan-tahiry lehibe indrindra any Jamaika, Etazonia sy Kanada, mba hampitomboana ny fahatongavan'ireo tonga any amin'ilay toerana mandritra ny herinandro sy volana ho avy ary koa hampiroboroboana ny famatsiam-bola bebe kokoa amin'ny sehatry ny fizahantany.
Minisitry ny fizahantany any Jamaika, Hon. Edmund Bartlett
Bartlett amin'ny antsipiriany Nahomby ny fisokafan'i Jamaika tamin'ny taon-dasa teo afovoan'ny areti-mandringana COVID-19, ny fananganana ny Resilient Corridors, ekena eran'izao tontolo izao ho COVID azo antoka ho an'ny mpitsidika sy ny Jamaikana, ary ny maha-zava-dehibe ny fiaraha-miasa matanjaka eo amin'ny Jamaica sy Southwest Airlines amin'ny fampiroboroboana ny sehatry ny fizahantany ao amin'ireo firenena fotoan-tsarotra.
Southwest's, Tale zokiny ho an'ny fiaraha-miasa stratejika sy fiaraha-miasa amin'ny sidina, Steven Swan, dia nanamarika fa Jamaika “be eritreritra”, “mazava”, “mora ifandraisana”, ary mirehareha amin'ny “enta-mavesatra tsara”. Ny mpitantana ny kaompaniam-pitaterana dia nanamarika ihany koa fa na ny Delta variant an'ny COVID-19 aza dia nanjary "nilentika" tamin'ny fitakiana ny dia an-trano sy iraisam-pirenena, dia nanohy nanao tsara ihany izy ireo ary matoky tanteraka ny amin'ny fitomboana amin'ny ho avy.